Universal Online TV | के रहेछ माग्नेबुढाको १० लाखको काण्ड? के रहेछ माग्नेबुढाको १० लाखको काण्ड?
के रहेछ माग्नेबुढाको १० लाखको काण्ड?
नाम माग्ने भएर के गर्नु ? खप्परमा लेखेर ल्याएपछि ‘माग्नेबूढा’ अर्थात् केदार घिमिरे एउटै फिल्मबाट लखपति भएका छन् । नायिका तथा निर्मात्री पूजा शर्माको आगामी अनटाइटल भेन्चरका लागि माग्नेबूढालाई केही सर्तसहित १० लाख रुपैयाँमा अनुबन्धित गरिएको छ ।